Eyga Shepherd Dog: Ogow astaamaha, asalka iyo daryeelka | Eeyaha Caalamka
Lurdes Sarmiento | | Eyda ayaa dhasha
Noocyada eyga oo dhami waxay leeyihiin astaamo u gaar ah. Sifooyinka jireed iyo nafsiyeedba waxay la xiriiraan labadaba hidde-sideyaashooda iyo shaqadii loo adeegsaday labadaba. The Caucasian Shepherd Dog waa hooyo, sida magaceedu ka tarjumayo, kana soo jeeda gobolka Caucasus.
Xaaladaha deegaanka awgood waxay soo saartay jaakad awood u leh inay ka ilaaliso heerkulka hooseeya iyo dhaawacyada ugu badan ee laga yaabo inaad ku dhacdo ganacsigaaga dhaqashada. Midabkeeda jir ahaaneed waa mid aad u xoog badan waxayna ka mid tahay eeyaha waaweyn ee jira.
In kasta oo ay jiraan noocyo badan oo ey ah oo ah eeyaha Caucasian oo leh astaamo isku mid ah, haddana kaliya hal nooc ayaa loo aqoonsan yahay magaca Adhijirka Caucasian.
Naadiga Kennelka Ruushka wuxuu doorbidaa inuu u isticmaalo tarjumaadda Ruushka idaad Ovcharka, magac kaas oo taranka sidoo kale caan ka noqday gobolka galbeedka. Adhijirka 'Caucasian Shepherd' waa qeyb ka mid ah seddexda caanka ah ee Adhijirka Ruushka oo loo yaqaan 'South Shepherd South' iyo 'Shepherd Central Asia'.
Asalka eeygan gaarka ah wali waxoogaa lama hubo oo waa xanta in asalka asalka lagu tixgaliyo eeyga Tibetan Mastiff. Waxa aan la inkiri karin ayaa ah in mudo dheer loo isticmaali jiray sida adhijir iyo ido mahadsanid muuqaalkiisa cajiibka ah, xoogga iyo iska caabinta heerkulka hooseeya.
Muuqaalka rasmiga ah ee rasmiga ah ee taranka eeyga eyga reer galbeedku wuxuu dib ugu soo noqday 30s Jarmalka. Runta ayaa ah waa nooc caan ah oo soo jireen ah astaamo gaar ah. Dhab ahaantii asal ahaan waxay ka timid dhul leh xaalado nololeed oo adag, dhinac u oggolaaday horumarinta hidde-ahaaneed ee gaarka ah ee taranka.
Qaniinyada eeygan ayaa ka mid ah kuwa ugu awoodda badan adduunka canine ka. Qalabkan weyn ayaa faa'iido badan u leh adiga dabeecad aan caadi aheyn oo ilaalin iyo dabeecad go'an.
Xaqiiqdii maahan xayawaan loogu talagalay dhammaan meelaha bannaan iyo nooc kasta oo milkiile ah. Dadka go'aansada inay soo saaraan noocyadan eyga waa in si wanaagsan loogu wargaliyaa iyaga sifooyinka, daryeelka iyo baahiyaha. Haddii aad si sax ah wax u barto naftaada waxaad lahaan doontaa shirkad aamin ah oo difaac ah.
Marka laga hadlayo muuqaalka muuqaalka eeyaha eeyda Caucasian haddii si sax ah loo kiciyo waa kuwo caafimaad qaba oo cimri dheer. Marka laga hadlayo jirkooda jir ahaaneed, waxay leeyihiin lafo adag iyo murqaha jirka.
Sanka iyo sanku waa iswaafajsan yihiin, dhagahooduna waa saddex xagal waxayna laalaadeen dhinacyada dhinacyada oo hadda waa mamnuuc in dhagaha laga jaro. Madaxa xayawaankani waa weyn yahay.
Maaddaama loo tixgeliyo eeyo waaweyn, waa in loo qaataa in baaxadda eydaasi ay aad u badan yihiin. Ku saabsan dhererka, celcelis ahaan waa 70 sentimitir. Si kastaba ha noqotee, farqi ayaa u dhexeeya labka iyo dheddigga.
Dhererka ugu yar ee ragga waa 65 sentimitir iyo 62 dheddig Sida dhererka ugu sareeya, ma jiro xad xadidan. Labku wuu weyn yahay wuuna cabiri karaa ilaa 75 sentimitir, dhadiguna 70.
Awooda cajiibka ah iyo murqaha awgeed, eeyaha Caucasian aad ayey u culus yihiin. Dumarku si dhib yar ma dhaafi karaan konton kiilo laakiin Ragga culeyskoodu waa 70 kiilo xitaa wuu gaari karaa 90. Marka la eego miisaanka, dimorphism-ka jinsiga ee jinsiga ayaa muuqda.
Marka loo eego jaakadda waxaa jira saddex nooc, timo dheer, gaaban iyo mid dhexdhexaad ah. Dhammaan saddexda nooc timuhu waa cufan yihiin oo siman yihiin. Waxay leeyihiin gaar ahaaneed inay leeyihiin midab khafiif ah oo dhogor dhogor ah oo ka ilaaliya cimilada qabow.
Noocani wuxuu leeyahay dhogor midabbo kala duwan leh laakiin kaliya cawl iyo dhibco cad oo dhogor dheer leh ayaa loo oggol yahay tartamada. Waxaa sidoo kale jira tijaabooyin midab madow ah iyo dhibco dab iyo midabbo leh.
Aqoonta dhinacyadan leh ee milkiilayaashu waa mid aasaasi ah waxaana u sabab ah hawsha uu eeyani fulisay qarniyo badan oo uu difaacayey iyo hagidda xoolaha, waxay leedahay astaamo lagu yaqaan hoggaamiye. Sababtaas awgeed, mulkiiluhu waa inuu isku muujiyaa inuu yahay hogaamiyaha xirmada noqoshada alfa iyo taas awgeed waa inaad aqoon leedahay.
Milkiilaha aan khibradda lahayn, korinta xayawaanku waxay noqon doontaa arrin adag, maaddaama milkiilaha ay tahay inuu ixtiraamo oo adeeco isagoo muujinaya xakameynta xayawaanka. Haddii tani si wax ku ool ah u dhacdo dammaanad aan la jebin karin ayaa laga dhex abuurayaa milkiilaha iyo xayawaanka rabaayadda ah.
In kasta oo ay tani si wax ku ool ah u dhacdo, waa in la ogaadaa in Caucasian Shepherd waa xayawaan leh dareen xoog leh oo haddii isaga ama qoyskiisa loo arko inay khatar ku jiraan, wuxuu u dhaqmi doonaa sidii uu u arko inay lagama maarmaan u tahay inuu difaaco dhulkiisa.
Sababtaas awgeed, waxaa aad muhiim u ah in dadkaas aan ehel la ahayn xayawaanka ay fogeeyaan oo aysan iloobin inay la kulmayaan qaniinyo xoog badan. Xiriirka xayawaanku la leeyahay carruurta waa mid aan dhib lahayn iyagoo tixgelinaya dabeecadooda kama fikiraan iyaga kuwo khatar ah sidoo kale milkiilayaashoodu ma tixgeliyaan
Aad bay muhiim u tahay in xayawaanadan aan lagu korin rabshad, uma baahnid inaad dhiirrigeliso dabeecad duurjoogta ah haba yaraatee. Way adeeci karaan, laakiin dareenkooda ilaalin ee cajiibka ah waa in la ixtiraamo. Waajibaadka xoolo raacista, hal adhi oo reer Caucasian ah ayaa wax ka qaban kara laba yey oo weeraraya adhiga.
In kasta oo culeyskiisa iyo muruqyadiisaba, si la yaab leh ayay u dhaqsaha badan yihiin uguna dhaqaaqayaan iyo dhogortoodu ma aha oo kaliya inay ka ilaaliso cimilada laakiin sidoo kale waxay ka ilaalisaa qaniinyada, maadaama oo ay qaro weyn tahay ay ku adkeyneyso ilkaha ka soo horjeedka inuu gaaro maqaarka.
Lama dafiri karo in eeyga Caucasian uu sumcad ku leeyahay rabshad laakiin inta badan sumcaddan waxaa lagu kasbaday daaweyn jaahil ah oo ku saabsan isirkan, isagoo ilaaliyaha weyn ee qoyskiisa. Waxay qabataa wixii lagu aaminay waxayna si hufan u fulisaa himiladeeda.
Dhinac muhiim ah ayaa ah waxay u baahan yihiin meel bannaan oo ay tamar ku qaataanIyagu waa deggan yihiin oo madaxbannaan yihiin oo si kedis ah ayey u noqdaan markay la xiriirto jinsiyadaha kale. Taasi waa in la yiraahdo, maahan eey magaalada ah maadaama meelaha magaalooyinka ka mid ah ay horumarin karto waxyaabo yar oo wanaagsan oo dabeecaddiisa ah.
In kasta oo xayawaankani caafimaadkiisu wanaagsan yahay oo aanu qabin cudurro dhaxal ah haddii waa mid u nugul cudurrada noocyada waaweyn.
Waa muhiim in la raaco tilmaamaha dhakhtarka xoolaha ee ku saabsan cuntada ay tahay inay raacaan iyo ka hortagga cudurada sida sinta, xusulka iyo dysplasia wadnaha. Tan dambe waxaa si weyn u saameeya cuntada xoolaha, sidaa darteed waa in laga fogaadaa culeyska iyo buurnida.
Daryeelka caadiga ah, tallaalada waa inaan la iska indhatirin iyo sidoo kale waa muhiim inaad ku cadayato qalabka ku habboon laba jeer usbuucii. Is dhexgalka ay la leedahay dabeecadda darteed, ka hortagga iyo ka hortagga waqtiga ku habboon waa in laga qaadaa nooc kasta oo dulin ah.
Ma jeceshahay kooxdan eyga ah? Nala soco waxaadna ogaan doontaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan tan iyo noocyo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dunida eyga » Eeyaha Guud » Eyda ayaa dhasha » Eyga Shepherd Dog
Ma rogayo. Eygaygu wuxuu galay shil yar misigihiisana waa la taabtay. Waxaan sameynay daaweyn kala duwan wuuna wanaajiyay isla waqtigaasna markale ayuu xumaa hadana hada sifiican ayuu ufiicnaanayaa dhowr bilood tan iyo markii aan siiyay mascosana cissus.
Tani waa wax cajiib ah, xitaa dhakhtarka xoolaha ayaa la yaabay.
Aad ayaan u faraxsanahay, laakiin waa inaan xasuusnaano in dhakhtarka xoolaha had iyo jeer uu yahay kan kaliya ee go'aan ka gaari kara waxa la siinayo ama aan la siinin xayawaan.
Jawaab Lurdes Sarmiento
Aad ayaan u faraxsanahay, laakiin waa inaan xusuusnaano inay tahay inuu noqdo dhakhtarka xoolaha oo had iyo jeer noo sheegta inuu qaadanayo ama uusan qaadanayn xayawaankeenna.
Waa maxay Ultra Levura maxaase loogu talagalay?